China inkunkuma ehambisa amanzi amdaka Amanzi Pump mveliso kunye nabenzi | IsiTongke
Umzekelo No: WQ
Impompo yokuhambisa amanzi ethe nkqo isetyenziselwa ukupompa ukungonakali, ubushushu obungaphantsi kwe-60 ° C, izinto eziqinileyo ezinqunyanyisiweyo (ngaphandle kwefayibha, iigrits) ezingaphantsi kwe-150 mg / L yomxholo wamanzi amdaka okanye amanzi amdaka. Uhlobo lwe-LPT lokuhambisa amanzi ngokuthe nkqo luhlobo lwe-LP yeempompo zamanzi ezithe nkqo, kwaye ngokwesiseko sokwanda kunye nekhola, cwangcisa ityhubhu yeoyile yokuthambisa ngamanzi. Ngaba ungatshaya ubushushu obungaphantsi kwama-60 ° C, uthumele ukuba uqulethe ingqolowa ethile eqinileyo (enje ngesinyithi esilahliweyo kunye nesanti entle, amalahle, njl. Njl.) Yelindle okanye amanzi amdaka.
Iindleko zokwakha ezisezantsi
Ulawulo olukrelekrele lokusebenza ngokukhuselekileyo
Iindleko zokuqhuba ezisezantsi
Iinkcukacha eziluncedo kuluhlu lwe-WQ kwimpompo yelindle engaphantsi
1. Uninzi lweempelesi ezinempompo yomngxuma ongaphantsi kwama-400 ziza njengesixhobo sokubaleka esivela kwi-bi-runner kwaye zimbalwa zazo i-multi-blade centrifugal impeller. Ngelixa uninzi lweempelesi ezinempompo yesithuba esingama-400 nangaphezulu ziza njengesixhobo sokuxuba esixubileyo kwaye ezimbalwa kuzo sisiphumo sokubaleka. Impompo enkulu yokubaleka impompo ivumela izinto eziqinileyo ukuba zidlule ngokulula kunye nemicu yokusonga ngokungafanelekanga ukuze ikulungele ukukhupha ilindle kunye nokungcola.
2. Amatywina amabini azimeleyo obuso obungagungqiyo bokugqibela abekwe kuthotho lwezixhobo, kunye nemowudi yokufaka njengemowudi yofakelo lwangaphakathi, kwaye, xa kuthelekiswa nemowudi yofakelo lwangaphandle, eliphakathi alikho lula ukuvuza kwaye isibini sokuloba lubricated yi-oyile kwigumbi leoyile. Isithuba esikhethekileyo sokujikeleza okanye umthungo omncinci usetyenziselwa ukumelana neenkozo eziqinileyo eziza kufakwa kwisitywina sempompo ukuze kuqinisekiswe ngomsebenzi ozinzileyo. Imowudi eyahlukileyo yokuyilwa kwetywina kunye nokudityaniswa kwendalo kwenza ukuba ingalo yesinqe ibe mfutshane, ukuqina okunzima kunye nokutsiba okuncinci, inzuzo engaphezulu yokunciphisa ukuvuza kwetywina lomatshini nokwandisa ubomi bayo.
3. Imoto yenqanaba lokhuselo i-IPX8 isebenza kwimowudi efakwe emanzini kwaye ibambe eyona nto ifanelekileyo yokupholisa. Ukufakwa kwinqanaba le-F kwenza ukuba i-jiko linyamezele ubushushu obuphezulu kwaye, xa kuthelekiswa neemotor eziqhelekileyo, zihlala ixesha elide.
4.Udibaniso olugqibeleleyo lwekhabhathi ekhethekileyo yolawulo lombane, inqanaba lolwelo elitshintshayo-lokutshintsha kwebhola kunye nezinto ezikhuselayo zenza esweni ngokuzenzekelayo kunye ne-alamu yokuvuza kwamanzi kunye nokujija ubushushu, ukukhuselwa kwisekethe emfutshane, ukulayisha ngaphezulu, ukungabikho kwesigaba kunye nokususwa kwamandla ombane, ulawulo oluzenzekelayo lokuqalisa, lokumisa, lokutshintsha kunye nobuncinane bokuntywila kompompo, ngaphandle kwesidingo sabantu abakhethekileyo bokujonga, ukhetho ngokuthanda luyafumaneka phakathi kwesiqalo sokunciphisa ukuzenzela kunye nokuthamba kombane qalisa. Zonke ezi zinto ziqinisekisa ukusetyenziswa kwempompo ngokukhuselekileyo nangokuthembekileyo ngaphandle kokukhathazeka.
5. Zombini iinxalenye zeemoto kunye ne-hydraulic zidityaniswe ngokuthe ngqo, ngaphandle kwesidingo sokujika ishafti sokufaka iziko, zidityaniswe ngokulula kwaye zidityaniswe ukugcina ixesha, isibonelelo sokugcinwa kwesiza, ukunciphisa ixesha elimisiweyo, ukugcina iindleko zokulungiswa; Isakhiwo esilula kunye nesicwangcisiweyo sishiya ivolumu encinci, kuphela izixhobo zokuphakamisa ezilula ezifunekayo, njengoko isiphatho esikhethekileyo sokuphakamisa sibekwe kwimpompo; Umhlaba omncinci kunye nempompo inokubekwa ngqo echibini lokuhambisa amanzi amdaka, ngaphandle kwesidingo sendlu ekhethekileyo yokumpompa, kwaye ke utyalo-mali lokwakha lungagcinwa ngaphezulu kwama-40.
6. Iyafumaneka ngeendlela zokufaka ezintlanu onokuzikhetha: ukudityaniswa okuzenzekelayo, umbhobho onzima oshukumayo, umbhobho othambileyo oshukumayo, uhlobo olumanzi olumiselweyo kunye neendlela zohlobo lofakelo olomileyo.
Ukufakelwa okuzenzekelayo kuthetha unxibelelwano phakathi kwempompo kunye nombhobho wokuphuma kwamanzi wenziwe ngesihlalo samanzi sombhobho wokudibanisa ngokuzenzekelayo, ngaphandle kokusebenzisa izinto zokubopha eziqhelekileyo, kwaye, nini ukwahlula impompo kumbhobho wamanzi sihlalo, yibeke nje phantsi kunye nentonga yesikhokelo kwaye uyiphakamise, ngokulingeneyo ukuze ukhululeke kwixhala kunye nengxaki kwaye ugcine ixesha.
Impompo yogutyulo lwelindle kwindawo yokumisa engagungqiyo ayithathi indawo yempompo endala kodwa ayoyiki ukuntywiliselwa kwezikhukula, ngenxa yoko akukho sibonelelo sendawo yokubonelela ngesikhukula, isibonelelo sokunciphisa iindleko zokwakha.
Zombini umbhobho onzima ohambisekayo kunye nofakelo lombhobho othambileyo, kunye nohlobo olunye olumanzi, zonke ziindlela ezilula kakhulu zofakelo.
7. Inkqubo yokupholisa iimoto inokusetwa kunye nempompo, engenakupholisa kuphela inqwelo mafutha kodwa ibe luncedo ekwehliseni inqanaba lephuli yelindle ukuze ikhuphe ilindle elikuyo ukuya kuthi ga kwinqanaba eliphezulu.
8. Impompo isebenza kwimowudi efakwe emanzini, ke akukho ngxaki yengxolo kunye nesibonelelo sokhuseleko lwendalo.
Egqithileyo Ukuhamba kweMVS nkqo kweAxial flow kunye nokuxutywa kokuxutywa kwempompo yelindle
Okulandelayo: Horizontal Split casing centrifugal yamanzi elwandle impompo
Umthamo 10-8000 m3 / h
Ubushushu boTywala ukuya kuthi ga kuma-60 ºC
Uxinzelelo lokusebenza ukuya kwi-18 bar
Iindawo eziphambili zempompo yogutyulo lwelindle olungena emanzini
Icandelo Izinto eziphathekayo
Impompo istampu & Pump inshorensi Isinyithi, i-Ductile iron, i-Stainless yentsimbi
Ukunyanzelwa Isinyithi, i-Ductile iron, i-Stainless steel, i-Bronze, i-Duplex SS
Injini enkulu Jula i-ayini
Itywina loomatshini Isibini esisiqhelo Grafayithi / Silicon khabhayithi
Grafayithi / Tungsten khabhayithi
Silicon khabhayithi / Silicon khabhayithi
Silicon khabhayithi / Tungsten khabhayithi
Tungsten khabhayithi / Tungsten khabhayithi
Ntlakohlaza Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
Inxalenye yerabha I-NBR
Ukucocwa kwelindle ukukhupha ilindle
Iprojekthi yokuhambisa amanzi ngenkunkuma
Amanzi emvula aqukethe izinto eziqinileyo kunye nemicu emide
CZ Horizontal end isiphelo sokufunxa amanzi olwandle ...